China shopify kuzadzikisa sevhisi uye mumiririri | Sunson
Zvinoshamisa zvakapusa Shopify kurongeka kuzadzikiswa ne Sunsonexpress. Isu tinobatsira Shopify vatengesi kuzadzikisa maodha nekukurumidza uye mutengo-mushe sezvinobvira kusangana nevatengi vavo zvavanotarisira.
Shopify inosanganisirwa inosanganisirwa nesoftware yedu kuti ishandise kuzadzisa uye manejimendi manejimendi, ichikuita iwe kuti utarise pakutengesa nekukudza bhizinesi rako - usinetseke Kurongeka kuzadzikiswa.
Kubatanidzwa kuri nyore
Unganidza yako Shopify chitoro kuSunsonexpress kuzadzikisa software mumatanho mashoma mashoma.
Batanidza chitoro chako nekudzvanya bhatani, wobva waendesa maodha ako mumasekondi. Basa rekudzosera kumashure ratove kuitirwa iwe, saka zviri nyore kutanga pasina kudikanwa kwekugadzira pamwe neyedu nyore API Kubatanidzwa.
Zvoga hurongwa kuzadzikiswa
Panongowanikwa odha pachitoro chako cheShopify, inotumirwa otomatiki kuSunsonexpress, uko ichatorwa, kurongedzwa, uye kutumirwa kubva kunzvimbo yedu yekuzadzikisa.
Iwe unogona kuteedzera iyo yekuzadzikisa maitiro kuburikidza neyako Sunsonexpress dashboard - kubva pakutenga kwevatengi kusvika pakuendesa.
Kurumidza Shopify kutumira
Vatengi vako vanotarisira kutumira nekukurumidza, kutengeka pavanotenga online.
Iwe unogona kusarudza Sunsonexpress, ichikupa iwe dzakasiyana siyana sarudzo dzemitengo uye yekumhanyisa kumhanyisa ayo anonyatso kusangana nezvinodiwa zvako.
Mirairo yakagamuchirwa pamberi pa4pm Beijing nguva ichatorwa uye kutumirwa zuva rimwe chetero!
Pangosvika odha yekutumira, ruzivo rwekutevera runosundidzirwa rwoga kuchitoro chako cheShopify uye ndokutumira kune ako vatengi.
Inventory manejimendi eiyo Shopify
Teedzera kuti yakawanda sei stock yauinayo pane edu ekuzadzikisa nzvimbo uchishandisa yedu yekuchengetera manejimendi sisitimu. Zvese zvese zviri mune chaiyo-nguva uye zvinokutendera iwe kuti udzore-zvekare stock kana ichidikanwa kubva kune vako veChinese vatengesi.
China Kuzadzikiswa Shopify
China Warehouse Kuzadzikiswa Sevhisi Kune Shopify Vatengesi
Shopify Kudonhedza Kuzadzikiswa
Shopify Kuzadzikiswa Service Uye Kudonhedza Kutumira Warehouse Service Yemahara Kuchengetedza
Shopify Kuzadzikiswa Kwemasevhisi Kuendesa KuFrance
Shopify Kuzadzikiswa Kwemasevhisi Kuendesa KuGerman
Shopify Kuzadzikiswa Services Kuendesa KwaUk
Shopify Kuzadzikiswa Services Kuendesa Kwatiri
Shopify Kurongeka Kuzadzikiswa
Shopify Shenzhen Kuzadzikiswa
Shopify Kutumira Uye China Kuzadzikisa Sevhisi KuPasirese
Shopify Kutumira Kubva kuChina Kuzadzikiswa Kwekuchengetera Ku Usa
Shopify Warehouse Kuzadzikiswa